Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya oo sheegay in COVID-19 uu ku dhacay | Dhacdo
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya oo sheegay in COVID-19 uu ku dhacay
Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya, Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud (Abuubabar) ayaa sheegay in toddobaadkii hore laga helay xanuunka COVID-19, ee fayriska Corona uu keeno.
Wasiirka oo marka hore ka jawaabaya bannaanbaxa ay maalinta Jimcaha ee ina soo aaddan iclaamiyeen Midowga Musharaxiinta ayaa yiri “Marka hore dadka Soomaaliyeed dhammaantood waxaan rabaa inay ogaadaan xuquuqda dadku ay ku dibadbaxaan, aragtidooda ku dhiibtaan waa xuquuq dastuuri ah oo cidna u diidi karin, Dowladda Federaalka Soomaaliyeed-na ay diyaar u tahay in ay dhowrto xuquuqdaas asaasiga ah ee muwaadinka Soomaaliga ah uu leeyahay inuu dibadbaxo iyo inuu fekerkiisa dhiibto, taas cidna iskuma diidana.”
Wasiirka oo soo hadalqaaday tallaabadii ay Ciidamada Dowladda 19-kii bishan kaga hortaggeen bannaanbixii Midowga Musharaxiinta ayaa sheegay in bannaanbaxaasi uu ahaa mid hubeysan, isla-markaana aanu ahayn midka uu dastuurku ogolyahay.
“Waxaa meesha la soo geliyay oo dhawr jeer aan ku arkayay Warbaahinta in ay jireen oo ka Soomaali ahaan wada aragnay in bannaanbaxa uu hubeysnaa, kaas maaha kan uu dastuurkeena ogolyahay, kan uu ogolyahay dastuurkeena waa bannaanbax nabadeed oo xadaari ah.” Ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay Warbaahinta Dowladda.
Wasiirka ayaa xusay in maalintii 8aad uu isu karantiilayo dalka Burundi, ka dib markii sida uu sheegay uu xanuunka COVID-19 ka soo qaaday Magaalada Muqdisho.
“Waxaa loo baahan yahay dadka inay ogaadaan, waana ogyihiin cudurka COVID-19 inuu Somaliya aad ugu faafay. Aniga hadda waxaan kaala soo hadlayaa dalka Burundi oo aan u imaaday shir, maalintii 8aad waxaan ku jiraa karantiil, maxaa yeelay waxaa igu dhacay oo ka soo qaaday Xamar cudurkii COVID, shir-na ma yeelan, intaas waxaan ku xiranahay meel, dawaa ii socota, laakiin qiyaas bal inta Soomaali ee Xamar joogta ee maalmahaan ugu dambeeyay dadka aan naqaanay ee u dhintay ama la ildaran cudurka.” Ayuu yiri Wasiir Abuubakar.
Waxa uu intaa ku daray “Caqli ma keeneynin in la yiraahdo dibadbax hala isugu soo baxo. Shirarkii Golaha Wasiirada iyo isku imaatanadii oo dhan, kuli waala wada baajiyay.”
Hadalka Wasiirka ayaa imaanaya, xilli Midowga Musharaxiinta ay shalay iclaamiyeen in bannaanbax kale ay Jimcaha soo socdo ku qabanayaan Caasimadda Muqdisho.